Stake Stake Mobile - Sida loo helo saamiga Android & iOS
Helitaanka Stake.com mobaylka Android ama iOS .
Wararka ku saabsan Khamaarka Mobilka
Macluumaadka Stake Mobile Saami
Tilmaamaha Khamaarka Mobilka ee Stake.com
Hababka Lacag-bixinta Mobilka ee Stake.com
Shabakadda moobiilka ee Stake.com
Stake.com waa guriga buuga isboorti ee cryptocurrency ugu weyn iyo casino adduunka. Stake waa mid caalami ah waxaana laga heli karaa PC iyo aaladaha mobilada adduunka oo dhan.
Haddii aad isticmaalayso mobaylka ama tablet-ka, waxa aad ka geli kartaa barta sharatka buuxda ee browser-kaaga moobaylka ah. Buuga ciyaaraha, khamaarka khadka tooska ah iyo alaabada kale dhamaantood waa laga heli karaa mobilada.
In ka badan 500,000 isticmaalayaasha diiwaangashan ayaa si firfircoon uga shaqeeya buuga ciyaaraha iyo casino, waxaadna ugu biiri kartaa Android , iOS ama aaladda Windows lacag la'aan.
Stake.com on Mobile waxa ay kuu ogolaanaysaa inaad gasho dhammaan aagagga mareegaha. Waxaad dhigi kartaa sharad isboorti, ciyaaro ciyaaraha khamaarka ee khadka tooska ah, waxaad samayn kartaa lacag dhigaal ah, si dhakhso leh ugala bixi kartaa guulahaaga, waxaad ku raaxaysan kartaa baahinta tooska ah, waxaadna ka heli kartaa taageerada macaamiisha taleefankaaga casriga ah ama tablet-kaaga.
Hagaha moobilka ee Stake Stake.com - Hagaha buuxa ee nooca moobilka saamiga
Stake Mobile-ka Saami
Sida loo galo Stake.com mobile
Macluumaadka App Mobile Saami
Stake.com Wax soo dejin ah ma jiro – madal sharadka buuxda oo laga heli karo browserka Mobilada
Android Haa – Guji si aad u gasho
iOS Haa – Guji si aad u gasho
Code Promo App NEWBONUS
Sharadka Ciyaaraha Haa - Is diwaangeli ka dibna gal si aad u gasho
Daawashada Tooska ah Haa - Is diwaangeli ka dibna gal si aad u gasho
Xusuusin: Stake.com laga heli karaa dhammaan aaladaha mobilada. iOS ayaa lagu tijaabiyay moodooyinka iPhone 4 iyo kuwa cusub. browserka Android ayaa lagu tijaabiyay noocyo kala duwan oo ay ku jiraan Google , Huawei , Motorola , Oppo , Samsung , Sony iyo kuwo kale.
Koodhka Xayeysiinta Mobilka Stake.com
Ciyaartoyda cusubi waxay isticmaali karaan koodka xayaysiinta ee Stake.com NEWBONUS markay ku biirayaan si ay u helaan gunnada ugu wayn ee la heli karo.
Koodhka NEWBONUS wuxuu furayaa gelitaanka gunnada ugu weyn ee la heli karo marka koontada la furayo, iyo sidoo kale dhammaan xayeysiisyada Ciyaaraha iyo Casino
Adigoo isticmaalaya koodhka xayeysiinta marka aad ku biireyso, ciyaartoyda cusub waxay heli karaan 200% gunno dhigaal ah oo qiimaheedu dhan yahay $1000. Gunnadan waxa lagu isticmaali karaa buugga ciyaaraha ama casino.
Taabo badhanka 'Diiwaangelinta' oo buuxi foomka diiwaangelinta gaaban kaas oo ku weydiinaya inaad abuurto magac isticmaale. Haddii kale, waxaad si degdeg ah isku diiwaan gelin kartaa adigoo isticmaalaya koontada warbaahinta bulshada.
Geli koodka xayeysiinta Marka lagu weydiiyo haddii aad leedahay Koodh, ku qor lambarka NEWBONUS . Adigoo isticmaalaya koodhkan, waxaad u qalmi kartaa 200% bixinta gunnada deebaajiga.
Koontadaada cusub hadda way furan tahay, waxaadna dalban kartaa gunnadaada.
Si aad u hesho gunnadaada:
Gal akoonkaaga cusub
Hubi inaad geliso koodka NEWBONUS marka lagu waydiiyo inaad leedahay kood
Markaad tan sameyso, gunnadaada waxaa lagu xisaabin doonaa akoonkaaga ciyaaraha ama casino. Waxaad ku heli doontaa 200% gunno deebaaji ah buugga ciyaaraha, iyadoo la heli karo ilaa $1000. Ku dheji $500 ee crypto si aad u hesho gunnada $1000 oo dhan.
Stake ciyaaraha ee saamiga ayaa laga heli karaa dhammaan aaladaha mobilada. App-ka gaarka ah Stake.com diyaar uma aha in la soo dejiyo, laakiin adiga oo gelaya buugga ciyaaraha ama Stake casino biraawsarkaaga moobiilka, waxaad geli kartaa sifo kasta, suuqa sharadka iyo qulqulka tooska ah ee aad ka heli karto haddii aad ku soo gasho kombayutarkaga.
Buuga ciyaaraha waxaad ka heli doontaa:
Toos: Taabo badhanka 'Dhacdooyinka Tooska ah' si aad u aragto dhammaan ciyaaraha tooska ah ee la heli karo iyo dhacdooyinka aad ku sharadsan karto, iyo sidoo kale dhacdooyinka sharadka ciyaarta dhexdiisa ee soo socda.
Stake.com : Daawo ciyaaraha baahinta tooska ah ee bilaashka ah. Ka fiirso astaanta telefishanka ee ku xigta dhacdo sharadka. Gal akoonkaaga si aad u daawato baahinta tooska ah ee dhacdadaas casrigaaga ama tablet-kaaga.
ESports: Ku sharad ESports maalin kasta buuga ciyaaraha, iyadoo sidoo kale taxanayaal toos ah la heli karo. Ciyaaraha caanka ah waxaa ka mid ah FIFA , League of Legends , Counter-Strike iyo Dota .
Nasiib wanaag dhammaan ciyaaraha
Sharadka ciyaarta dhexdiisa ah
Tirakoobka Tooska ah
Suuqyada sharadka oo balaadhan
Bixinta degdega ah
24 saac taageerada macaamiisha
Waxa kale oo aad si degdeg ah u geli kartaa alaabada kale marka aad soo gasho Stake mobaylkaaga, oo ay ku jiraan:
Casino: Dooro in ka badan 2,000 ciyaaraha casino online iyo boosaska
Live Casino: Play kulan dealer live 24/7
Stake.com waa goobta sharadka cryptocurrency ee ugu weyn adduunka. Debaajiga lagu sameeyo moobilka ayaa si sax ah ula mid ah haddii aad isticmaalayso kombuyutarka ciyaaraha ama casino. Waxaad dhigaalkaaga ku samaysaa crypto , iyadoo Bitcoin , Ethereum , Litecoin , Dogecoin , Tron , Bitcoin Cash iyo Ripple dhamaantood waa la aqbalay.
Waxa kale oo aad dhigi kartaa sharadkaaga oo aad ku ciyaari kartaa lacagaha waaweyn sida Doolarka Maraykanka, Doolarka Kanada iyo Yen-ka Jabbaan. Markaad gasho akoonkaaga, si fudud u dooro inaad ku aragto baaqigaaga crypto ama USD .
Stake.com si buuxda ayaa loogu hagaajiyay aaladaha mobilada. Waxaad ku dhejin kartaa ciyaarahaaga ciyaaraha ama waxaad ku ciyaari kartaa ciyaaraha khamaarka onlaynka ah ee Android , iOS iyo Windows aaladaha adigoon u baahnayn inaad soo dejiso app.
Dhammaan qaybaha goobta Safari ee lagu Windows PC waxa laga heli karaa inta badan aaladaha Chrome , iyada oo aan loo eegin waddanka aad ku nooshahay
Khamaarka tooska ah ee Stake.com
Buugga ciyaaraha ee Stake waa caalami. In ka badan 500,000 isticmaalayaasha diiwaangashan ayaa soo galay daawashada iyo sharaadka ciyaaraha tooska ah.
Sharadka tooska ah ayaa laga heli karaa dhammaan ciyaaraha waaweyn iyada oo loo marayo qalabkaaga moobaylka, halka Stake.com mobilada tooska ah ay kuu ogolaanayso inaad si toos ah ciyaarta u daawato adigoo barbar dhigaya sharadkaaga.